OnePlus 7 ayaa shaaca ka qaadi doona taariikhda la soo bandhigi doono maalinta Talaadada ah | Androidsis
OnePlus 7 waa mid ka mid ah taleefannada la filayo gu'gan. Wax yar ayaan ka ogaanaynaa aaladda. Waan ogahay toddobaad la sifeeyey waxa noqon doona taariikhdiisa rasmiga ah ee soo bandhigidda. Intaa waxaa dheer, agaasimaha guud ee shirkadda wuu inaga tagayaa durba leh xoogaa horumar ah oo ku saabsan dhamaadka-sare. Hadda, waan ognahay goorta taariikhda diiwaangelintaada la shaacin doono.
Mar labaad, wuxuu ahaa Pete Lau, agaasimaha guud ee shirkadda, oo mas'uul ka ahaa ku dhawaaqista. Ayaa sheegay in Talaadada waxaan filan karnaa war marka OnePlus 7 si rasmi ah loo soo bandhigi doono. Marka dhawaan waxaan heli doonaa xaqiijintaan rasmiga ah.
Waxay ku timid fariin ku saabsan Twitter yaa xaqiijiyay in maalinta talaadada aan heli doono macluumaadkan. Daqiiqad ay dad badani filanayeen, marka la fiiriyo rajada laga qabo in loo soo saaro dhinaca OnePlus 7. Su'aashu waxay tahay ma waxay noqon doontaa isla taariikhda bandhigga ee la sii daayay usbuuc ka hor iyo in kale, maadaama wax waliba ay muujinayaan inay sidaas noqon karto.
La soco Talaadada soo socota si aan ugu dhawaaqno dhacdadeena bilaabida?
- Pete Lau (@ nacaybtire2007) April 19, 2019
Waxay u muuqataa taas sanadkaan waxay raaci doonaan isla xeeladii sanadkii hore. Marka taleefanka waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bartamaha Maajo. In kasta oo ay tahay inaan sugno xoogaa xaqiijin ah Agaasimaha Guud Talaadadan, si aan u aragno haddii 14-ka Maajo ugu dambeyn ay tahay taariikhda la doortay.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira shaki kale oo weyn oo arrintan la xiriira. Sida Ma garanayno inay jiri doonaan hal ama laba nooc oo OnePlus 7 ah oo la soo bandhigi doono. Toddobaadyadan waxaa jiray xogo qarsoodi ah, oo tilmaamaya jiritaanka nooc Pro ah, in kasta oo agaasimaha guud ee shirkaddu uusan rabin inuu wax ka yiraahdo arrintan illaa hadda.
Sidaas darteed waxaan rajeyneynaa inaan helno xog dheeri ah Talaadadan. Maaddaama ugu yaraan la xaqiijiyey markaan si rasmi ah ula kulmi karno OnePlus 7-kan. Marka waan ka fiirsaneynaa ogeysiiskan waxaanan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aan ka ogaanno Talaadadan oo ku saabsan dhamaadka-dhamaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Talaadada waxaa lagu dhawaaqi doonaa marka la soo bandhigo OnePlus 7
Marka waxaad kuheli kartaa tilmaame batteriga Samsung Galaxy S10 taleefan kasta oo casri ah kamarad daloola